किन मैले उत्पाद सूची अनुकूलनको लागि अमेजन किवर्ड जेनरेटर प्रयोग गर्नुपर्छ?
आजकल, अमेजनमा ईकमरस व्यवसाय लिने व्यक्तिहरूको बढ्दो संख्या संग, त्यहाँ तपाईंको उत्पादनको लागि मार्केट प्रतियोगिताको वास्तवमा cutthroat स्तर छ।. र तपाईंको उत्पाद पृष्ठ उत्पादन खोजमा अधिक देखिने दृश्यात्मक बनाउन यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ. यसैले एक सफल बिक्रेताको रूपमा जीवित रहने लगभग असम्भव छ किनकि राम्रो अमेजन किवर्ड्स जेनरेटर र अनुसन्धान उपकरण (वा अनलाइन फ्रेमवर्क) छान्ने बिना छान्नुहोस्।. तर अरू केही अघि, म सिकाउने एक टुक्रा सुरू गर्न सुझाव दिन्छु. तपाईंका मुख्य लक्ष्यशब्दहरू किन महत्त्वपूर्ण छन्? राम्रो छ, गरौं.
अमेजन खोजशब्द के हो?
प्रमुख खोजी इञ्जिनहरू जस्तै (जस्तै Google आफ्नै, साथसाथै याहू, बिंग, आदि. ), तपाईंसँग एक विश्वसनीय अमेजन किवर्ड्स जनरेटर उपकरण हुनु आवश्यक छ कि यी अत्यधिक-विशिष्ट शब्दहरू, वाक्यांशहरू वा वाक्यहरू पत्ता लगाउनको लागि प्रत्यक्ष विक्रेताहरू प्रयोग गर्ने सबैभन्दा अधिक हुन्छ जब त्यहाँ त्यहाँ बिक्री बिक्रीका लागि हेर्दै जान्छ।. त्यस तरिका, औसत खोज भोल्युम प्राथमिक मेट्रिक्सको बीचमा देखा पर्दछ (निस्सन्देही, अनुमानित अनुमानको रूपमा) कतिजना मानिसहरू वास्तवमा एक निश्चित कुञ्जी शब्द वा लामो-पछाडि खोजी वाक्यांश प्रयोग गर्दैछन् जुन तिनीहरूले खोजिरहेका छन् भेट्टाउन पाउनका लागि.
अमेजन खोजशब्द जेनरेटर किन प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ?
यहाँ केहि कारणहरू छन् कि तपाई एक वास्तवमा प्रदर्शन गर्ने अमेजन खोजशब्दहरु जनरेटर र अनुसन्धान उपकरण को उत्कृष्ट नाम बुझ्नको लागि बुझ्न सक्नुहुन्छ।. अन्ततः, सही खोजशब्दहरू को लागी अपेक्षित आवश्यक छ:
अमेजनमा हरेक संभावित ग्राहक खरिदका लागि तपाईंको उत्पादनलाई थप पहुँचयोग्य बनाउनुहोस्।. सजिलै राख्नुहोस्, तपाईंको उत्पादन सूचीमा समावेश भएका सही कुञ्जी शब्दहरूसँग, यो थप खोजी गर्ने व्यक्तिहरूलाई तपाईँको उत्पादनहरू पत्ता लगाउन सजिलो हुनेछ - एक निश्चित वस्तु / उत्पाद कोटि खोजमा तपाईंको लक्षित अनलाइन एक्सपोजर सुधार गर्न.
बढी लक्षित कार्बनिक वेब ट्राफिक पम्प - सिधै तपाईंको उत्पादन पृष्ठ / मुख्य वेबसाइटमा. मेरा मतलब छ कि एक निश्चित खोजशब्द वा लामो-पूंछ खोज संयोजनको लागि राम्रो स्तर निर्धारण गर्दा तपाईंलाई A9 एल्गोरिदमको लागि सजिलो बनाउँछ।. यस तरिका, एक उच्च ट्राफिकले तपाईंलाई निश्चित रूपमा ल्याउने वस्तुहरूको बढ्दो संख्यामा अन्य वस्तुहरू बेच्न मिल्दो वस्तु खोज्न वा समान वस्तु कोटी भित्र खोजी गर्न सम्भव छ।.
कहां खोजशब्दों को शामिल गर्न को लागी?
मूलतः, तपाईंको मुख्य लक्ष्य खोजशब्दहरू तपाईंको समग्र उत्पादन सूची अनुकूलन अभियान भित्र प्रयोग गर्न को लागी हो. र यसको सामना गरौं - तपाईंको उत्पादन पेज अप्टिमाइजेसन एक निरन्तर, समय-उपभोग र धेरै श्रमिक गहन गरिरहेको छ. तर यदि तपाई इच्छुक हुनुहुन्छ र केहि समय यो लगानी गर्न तयार हुनुहुन्छ भने तपाई अमेजनमा पुरातन व्यापार सम्पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ. त्यसोभए, तपाईंले एक राम्रो अमेजन किवर्ड किनेजर जेनेरेटर रोज्नुभयो - जहाँ तपाइँका सबै भन्दा राम्रो लामो-पूरक संयोजनहरू र कीवर्ड सुझावहरूका साथ तपाइँको उत्कृष्ट किबोर्डहरू प्रयोग गर्ने? तपाईंको लक्षित उत्पादका लागि अनुकूलन गर्न तपाईंको उत्पाद पेजको मुख्य भागहरू यहाँ छन्:
उत्पादन पृष्ठको शीर्षक (आफ्नो मुख्य कुञ्जीहरू आफ्नो कम महत्वको क्रममा राख्ने ठाउँ).
उत्पादन विवरणको भाग (तपाईंको मुख्य-लम्बाइ शब्दको मुख्य संयोजन समावेश गर्न को लागी हो।).
बुलेट प्वाइन्टहरूको सूची (वास्तवमा, यो तपाईंको उत्पादन विवरणको छोटो संस्करण हो, तर निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँसँग कुनै शब्दहरू बारम्बार तपाईंको शीर्षक र बुलेटहरूको सूचीमा समावेश गर्दछ) Source .